NYX ရဲ့ Can't Stop Won't Stop Contour Concealer !! | CosmeticMyanmar
Home » Article » NYX ရဲ့ Can’t Stop Won’t Stop Contour Concealer !!
အားလုံးပဲမင်္ဂလာမနက်ခင်းလေးပါရှင့်။ ဒီနေ့မှာတော့ NYX က အသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ Can’t Stop Won’t Stop Contour Concealer လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
Beauties တို့အနေနဲ့ ပုံမှန် Foundation တမျိုးတည်း အသုံးပြုရုံနဲ့တင် အပြစ်အနာအဆာများကို မဖုံးအုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးနော်။ ဒီတော့ အရေအသွေးကောင်းမွန်ပြီး အမှန်တကယ်ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်မယ့် Concealer လေးကို ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီ Can’t Stop Won’t Stop Contour Concealer လေးဟာ အသားအရောင်မရွေး လွယ်ကူစွာ ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ရန်အတွက် အရောင် 24 ရောင်ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Lightweight ဖြစ်တဲ့ အတွက် အသုံးပြုတဲ့အခါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ပြစ်ချက်များကို ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်မှာပါ။ Creamy အမျိုးအစားဖြစ်တာကြောင့် အရမ်းကြီး ခြောက်ကပ်နေတာမျိုးမဖြစ်တဲ့အတွက် အသုံးပြုရတာချောမွေ့စေပါတယ်။ မျက်နှာအသားအရေကို ဝင်းစေတဲ့အပြင် အပြစ်အနာအဆာများကို ဖုံးအုပ်ထားတယ်လို့ မထင်ရအောင် သဘာဝအတိုင်းကို လှပနေစေပါတယ်။ ၂၄ နာရီကြာ ဖုံးအုပ်ပေးထားနိုင်တာကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ပြီး ပုံမှန်အသုံးပြုနေကျ အောက်ခံတမျိုးမျိုးကို ထပ်လောင်းအသုံးပြုပေးသင့်ပါတယ်။
အပြစ်အနာအဆာတွေကို ဖုံးအုပ်ပေးရုံသာမက Contouring အနေနဲ့ပါ အသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် လုံးဝအကြိုက်တွေ့စေမယ့် Product လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် 24 နာရီကြာဖုံးအုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် တနေကုန် ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်တာပေါ့နော်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့်9$ နဲ့ ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် USA Direct Cosmetic ဒါမှမဟုတ် NYX Counter တို့မှာ မှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
Photo – https://www.nyxcosmetics.com